Wax ogolow si wax laguugu ogolaado!! | puntlandi.com
Friday, January 25th, 2013 | Posted by admin admin
Wax ogolow si wax laguugu ogolaado!!
Sheeko xilli hore iigu danbaysay ayaa mar dhexe nin aan saxiib nahay isoo xasuusiyay ,waxay ahayd:
“ Wiilkii aabbihiis codsiga gaaban u jeediyay ee yiri aabboow hal arin baan kaa codsanayaa ; wax aan adigana wax kaa dhimayn anigana wax wayn ii taraya , waxaad ku dhahdaa hooyo marka aad wiilka caanaha u lisaysid galaanka u buuxi”…
Waxa jira hadal aan adiga wax kaa dhimayn qofka walaalkaa ahna uu u arki karo wax wayn; waxaa taas lamid inuu jiro hadal inuu qof kaa fogeeyo maahee aan kuu soo dhawaynayn.
Hadallada dadka si kala fogeeya ee baryahan dadka dhagohooda kusoo noq noqday:-
Dawladda Soomaliya: “ Dalka Soomaaliya kama dhaqan gali karo federal, dawlad goboleedyaduna waa riyo”
Somaliland: “ Soomaaliya waa waddan ka dhacay waddada, annagana ictiraafkeennii ayuu la dagay”
Puntland: “ Maamulka waqooyi galbeed waa inuu faragalinta ka daayaa shacabka Puntland”
Reer Hebel: “ Reer hebel dad dhib u samaysan weeye, rer hebel waa sidaas iyo sidaas”
Soomaali run ahaantii waxaad mooddaa wax kale daaye in libinta kan kale ee walaalkood ah aysan u ogolayn;
Dad badan baa markaan waydiiyo maxaa ugu wacan in Somaaliya dawlad heli waydo muddo kor u dhaafaysa 20 sano, waxay iigu jawaabaan, Qabyaalad, faragalin shisheeye, dhaqaalo daro. Wan ku raacay qayb ahaan qodobadaasi inay kamid noqon karaan qodobada Somali ka dagi wayday laakiin mid kamid ah qodobadasi safka ugu horeeya iiguma jirin. Marbaan aaminsanaa in qabaa’ilku u baahan yihiin dib u heshiisiin, laakiin waa la tijaabiyay in qabiilladu is diiddanayn, ee ay u baahan yihiin caddaalad cid ku dhaqda oo kii gar daran ka qabta dadka.
Inaan xaq aan leenahay ka tagno waxaan dhaqan ahaan u aragnaa, liidnimo, laangaabnimo, hoosyan, iyo xumaan oo dhan. Laakiin waa intaasoo dhacn cagsigeeda, haddaad maslaxad xaq aad leedahay uga tagtid waa xaqiiq inaad baddalkeeda helaysid am aka badan…. Ma sugayo dhawaanahan inaan aragno dad xaqoodi ka tagay maxaa yeelay waxa la isku doortaa ama nabadoon la isaga dhigaa waa yaa xaqeennii iyo xaq kalaba noo soo dhicinaya oo nin nin dhalay ah.
Waxa la sheegaa wixii lagu cel celiyo bulshaduna aysan ceeb u arag ay hadhow isku baddalan dhaqan. Dhaqanka ah in Soomaali wax isku diiddo oo markay hayb hayb iyo beel beel hoose iskula joogaanna ayaga ay yihiin dadka ugu fiican , ugu aqoon badan, uguna nabadda jecel, dadka kalana aysan waxba ahayn, waa dhaqan iska noqday mid guud; waad igu diidi kartaa haddii aad wax ka qabtid.
Isku tanaasulka iyo wax isku ogolaanshaha waxaa tijaabiyay waddamada reer galbeedka oo ah waddamada ugu horumarsan caalamka. Dagaallada iyo dhibaatada ay soo mareen ayaa bartay in isku tanaasulka uu yahay xalka kaliya ee horumar waara lagu gaari karo.
Gabo gabada: Hoo baa Hoo dhasha; u ogolow walaalkaa ugu yaraan inuu jiro uuna waxtar iyo qiimoba leeyahay, si adiguna aad taas u heshid.